माइतीघरमा नेपाल-दाहाल समुहको प्रदर्शन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललगायतका शीर्ष नेताहरु माइतीघर मण्डलामा पुगेका छन् । ‘हामी यहाँ छौँ’ लेखिएको प्लेकार्ड छातीमा टाँसेर उनी...
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललगायतका शीर्ष नेताहरु माइतीघर मण्डलामा पुगेका छन् ।
‘हामी यहाँ छौँ’ लेखिएको प्लेकार्ड छातीमा टाँसेर उनीहरु माइतीघरमा जारी आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले आज माइतीघर मण्डलामा प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर संयुक्त पत्रसहित निर्वाचन आयोगमा जाने र २ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने योजना छ ।
मरुभूमिमा एउटा कवि
दुःखले मान्छेलाई द्रवित पार्छ । त्यसैले मान्छेले सुखमा भन्दा दुःखमा अभिव्यक्ति खोज्छ । भन्छन्–सुख बाँडे बढ्छ, दुःख बाँडे घट्छ । दुःख त घटाउनु नै छ नि ।
र, दुःख बाँड्न रुनु नै छ !
अनि न अरबको खाडीमा एउटा मजदुर शब्दहरूमा रुन्छ । मनभरि रुन्छ । गहभरि रुन्छ । रातभरि रोएर हल्का हुन्छ । बिहान काममा जान्छ ।
उँधो बगिरहेको जीवनप्रवाहमा हेलिएर त्यो मरुभूमिमा म...
यो पङ्तिकार रुकुमको चौरजहारी बस्दाखेरिको कुरा हो, त्यतिबेला मेरो छिमेकमा एकजना बादी दाइको परिवार बस्थे । ब...
यो पङ्तिकार रुकुमको चौरजहारी बस्दाखेरिको कुरा हो, त्यतिबेला मेरो छिमेकमा एकजना बादी दाइको परिवार बस्थे । बादी दाइ र उनको बूढीले दिउसभरि चिलिम बनाउने र बेच्ने गर्थे । हामीले उनलाई चिलिमे दाइ भनेर बोलाउथ्यौं । त्यतिबेला नून र अन्य सामानहरु खरिद गर्न नेपालगञ्ज र चौरजहारीसम्म आएका डोल्पा र जाजरकोटतिरका मानिसहरुले चिलिमेदाइका परिवारले बनाएका चिलिम पनि लिएर जान्थे । व्यापार राम्रो चल्थ्यो...
बुटवलका कुशल मल्ल टी–१० लिगका लागि छनोट
नेपाली राष्ट्रिय टोलीका तीन खेलाडी टी–१० लिगका लागि छनोट भएका छन्। युएईमा जनवरी २८ देखि सुरु हुने टी–१० लिगको चौथो संस्करणका लागि सोमपाल का...
नेपाली राष्ट्रिय टोलीका तीन खेलाडी टी–१० लिगका लागि छनोट भएका छन्।
युएईमा जनवरी २८ देखि सुरु हुने टी–१० लिगको चौथो संस्करणका लागि सोमपाल कामी, करन केसी र कुशल मल्ल छनोट भएका हुन्।
एउटै विदेशी लिगमा तीन नेपाली खेलाडी छनोट भएको यो पहिलो पटक हो। यसअघि गतसंस्करणको ग्लोबल टी–२० लिग क्यानडामा सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछाने र गतसंस्करणको टी–१० लिगमा पारस खड्का र लामिछाने छनोट...
गृहमन्त्री थापा ओलीतिर लुम्बिनी प्रदेश कानून मन्त्री केसी प्रचण्डतिर !
नेकपाको विभाजनमा सचिवालय सदस्य एवम् गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्ना निकटवर्तीलाई आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिएको बताइएको छ ।
उनीनिकट मानिने लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य आईपी खरेलले बुधवार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “बादलजी सम्बन्ध तोडिन्न, तपाईसँग सति जान सकिएन। तपाईँको प्रगति होस् ।“
खरेलले बुधवार राति गृहमन्त्...
घरजग्गा किन्ने भन्दा बेच्ने धेरै
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा रुपन्देहीमा घरजग्गाको कारोबार बढ्न सकेको छैन । अहिले जग्गा किन्ने भन्दा पनि बिक्री गर्नेहरु धेरै देखिएका छन् । जग्गा व्यवसायीहरु भन...
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा रुपन्देहीमा घरजग्गाको कारोबार बढ्न सकेको छैन । अहिले जग्गा किन्ने भन्दा पनि बिक्री गर्नेहरु धेरै देखिएका छन् । जग्गा व्यवसायीहरु भने अधिकांश सर्वसाधारणले बैंकमा धितो राखेर जग्गा किनेको तर अहिले बैंकको क्रृण तिर्न नसकेका कारण बिक्री गर्नेहरु बढेको बताउँछन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बिक्री गर्ने बढे पनि किन्ने मानिस निकै कम भएको घर–जग्गाको कारोबार गर्ने व...
सातजना मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा
संघीय सरकारका सातजना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको कदम चालेपछि नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्...
संघीय सरकारका सातजना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको कदम चालेपछि नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाका सातजना मन्त्रीले आइतबार सामूहिक राजिनामाको घोषणा गरेका हुन्।
सातैजनाले पत्रकार सम्मेलन गरेर सामूहिक राजीनामा गरेका हुन्।
राजिनामा दिनेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प...
सरकारले पूर्वसचिव प्रेम कुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरेको छ । मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नै उनला...
सरकारले पूर्वसचिव प्रेम कुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरेको छ ।
राईको शिफारिशपछि राजनैतिक बृत्तमा अर्को तरङ्ग आएको छ ।
ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको दिन नै राईलाई आयुक्तमा सिफारिस गरेको खबर बाहिर आएको हो ।
संसद विघटन, वैशाख १७ र २७ गते चुनाव
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले आइतबार संघीय संसद विघटन गरेकी हुन् । राष्ट्पतिले आगामी व...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले आइतबार संघीय संसद विघटन गरेकी हुन् ।
राष्ट्पतिले आगामी वैशा १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी चुनावको मिति तोकेकी छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं...
विभिन्न विधामा दैनिक भैरहेका तालिम कार्यक्रमहरूको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तालिमको प्रभावकारिता तालिम सिपको प्रयोग र त्यसबाट राम्रो नतिजा आउन सकेमा सकारात्मक प्रभाव परेको प्रमाणित...
विभिन्न विधामा दैनिक भैरहेका तालिम कार्यक्रमहरूको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तालिमको प्रभावकारिता तालिम सिपको प्रयोग र त्यसबाट राम्रो नतिजा आउन सकेमा सकारात्मक प्रभाव परेको प्रमाणित हुन्छ । तालिम आयोजक, प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थी छनोट, व्यवस्थापन, तालिम पाठ्यक्रम र सत्र सञ्चालन जस्ता पक्षहरूको स्तरीयताले तालिमको गुणस्तर निर्धारण गर्दछ । तालिमको प्रभावकारिता बढाउने प्रमुख आधारका रूपमा तालिमको गुणस्तरलाई मान्नु पर्दछ । तसर्थ हरेक तालिमको व्यवहारमा प्रयोग हुन न...